မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): အောက်တိုဘာလ 31 ရက်နေ့ မှာကျရောက်တဲ့ Halloween Day အကြောင်း
အောက်တိုဘာလ 31 ရက်နေ့ မှာကျရောက်တဲ့ Halloween Day အကြောင်း
Halloween ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပကြတယ်။ ဒါဟာ နွေရာသီကုန်လွန်ပြီး ဆောင်းရာသီစတဲ့ရက်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီနေ့ဟာ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာအစဉ်အလာနေ့ တစ်နေ့ဖြစ်တယ်။ အဓိကအားဖြင့် United States, Canada, Ireland နဲ့ United Kingdomမှာ ခေတ်စားတယ်။ Halloween ညမှာ ကလေးတွေဟာ မျက်နှာကို အမျိုးမျိုးလိမ်းခြယ်ကြသလို မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီးလည်း တစ်အိမ်တက်ဆင်း ချိုချဉ်လိုက်တောင်းလေ့ရှိတယ်။
Halloween ဆိုတာ All Hallow Eveရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်တယ်။ All Hallow's Day မတိုင်ခင်တစ်ရက်ကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ Hallow က ရှေးအင်္ဂလိပ်စကား halwen က ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး holy စကားလုံးနဲ့ အဓိပ္ပာယ်နီးစပ်တယ်။ စကောတလန်နဲ့ ကနေဒါ တချို့နေရာတွေမှာ Halloween ကို Allhallowmas လို့ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေသေးတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က မြင့်မြတ်သူတို့ကို (All Hallows) အောက်မေ့တမ်းတတဲ့နေ့ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲတွေ ကျင်းပကြတယ်။
သာမန်အားဖြင့် Halloweenညကို မကောင်းဆိုးဝါး၊ ဝိညာဉ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ထားကြတယ်။ ဥရောပဒေသရဲ့ အစဉ်အလာမှာ ဒီအချိန်ဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေဟာ လူတွေနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးအချိန်လို့ ဆိုထားတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ Minnesota ပြည်နယ် Anokaမြို့ကို "ကမ္ဘာ့ Halloweenမြို့"လို့ တင်စားကြတဲ့အထိ Halloweenပွဲကို အဲဒီမြို့မှာ အကြီးအကျယ် ကျင်းပတတ်တယ်။
Halloweenဟာ တစ္ဆေသရဲ၊ မကောင်းဆိုးဝါး၊ သေမင်း၊ မှော်ဆရာ စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် Halloweenနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့အရာတွေက ရွှေဖရုံသီး၊ သရဲ၊ စုန်းမ၊ ဇီးကွက်၊ ကြောင်မဲ စတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အရာတွေဖြစ်တယ်။ အမဲရောင်နဲ့ လိမ္မော်ရောင်က Halloweenရဲ့ ရိုးရာအရောင်ဖြစ်တယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် စတဲ့ အရောင်မျိုးစုံတွေ သုံးလာကြတယ်။ ဆောင်းဦးရာသီမှာရှိတဲ့ ရွှေဖရုံသီးနဲ့ စာခြောက်ရုပ်ဟာလည်း Halloweenရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တယ်။
Jack O'Lantern လို့ခေါ်တဲ့ ဂျက်မီးပုံးဟာ Halloween ရဲ့ အမှတ်အသားဖြစ်တယ်။ အင်္ဂလန်နဲ့ အိုင်ယာလန်တွေမှာ နေထိုင်ကြသူတွေက အခေါင်းဖောက်ထားတဲ့ Turnipဥထဲ ဖယောင်းတိုင်ထည့်ထွန်းပြီး ဂျက်မီးပုံးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ကို ပြောင်းရွှေ့လာကြသူတွေက Turnipဥအစား ရွှေဖရုံသီးကို အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ ရွှေဖရုံသီးက ပိုကြီးပြီး ပုံဖော်ရာမှာလည်း လွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ များသောအားဖြင့် လူတွေက ရွှေဖရုံသီးကို ကြောက်စရာရုပ်ထုတွေ ထွင်းထုပြီး နေအိမ်တံခါးဝမှာ ချထားလေ့ရှိတယ်။ အစဉ်အလာအရ တစ္တေသရဲ၊ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ခြောက်လန့်ဖို့ဖြစ်တယ်။
Halloweenညရဲ့ ပျော်ရွှင်ပွဲတစ်ခုက Trick-or-treating ဖြစ်တယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ ကြောက်စရာရုပ်အသွင် ဖန်ဆင်းပြီး တစ်အိမ်တက်ဆင်း တံခါးလိုက်ခေါက်ပြီး "Trick or Treat!"လို့ အော်ကြတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က "ချိုချဉ်မပေးရင် နှောင့်ယှက်မယ်"ဆိုတာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အိမ်ရှင်တွေကလည်း ကြောက်စရာ အဝတ်အစားတွေဝတ်ပြီး ကလေးတွေကို ချိုချဉ်၊ ချောကလက် ဒါမှမဟုတ် လက်ဆောင်လေးတွေ ဝေငှာပေးတတ်ကြတယ်။
Halloweenအကြောင်း အပြည့်အစုံဖတ်ချင်ရင် wikipediaမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ဟာ Halloween နေ့မို့ ဖတ်မိတဲ့ Halloweenအကြောင်း အနည်းအကျဉ်းတချို့ကို ဘာသာပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. Happy Halloween, all my friends.း)
Credit - https://www.facebook.com/note.php?note_id=313489418666290
Author Anonymous at 7:03:00 PM